C/xakiin Camey: "Go'aanadii Maamul Goboleedyada ee Garowe waxay ahaayeen Riyo maalmeed aan laga fiirsan.." - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/C/xakiin Camey: “Go’aanadii Maamul Goboleedyada ee Garowe waxay ahaayeen Riyo maalmeed aan laga fiirsan..”
C/xakiin Camey: “Go’aanadii Maamul Goboleedyada ee Garowe waxay ahaayeen Riyo maalmeed aan laga fiirsan..”
Madaxweyne ku xigeenka Puntnland C/xakiin Xaaji Cumar (Camey) ayaa ka hadlay khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada, isagoo ka hor yimid go’aanadii maamul Goboleedyada ee kasoo baxay shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Garowe.
“Go’aamaadasi waxaan u arkaa riyo maalmeed aan suuragal ahayn, qof kastoo Soomaali ah wuu la yaabay, iyagana uma aha suuragal, dalkana suuragal kama aha, khaladka waa loo wada jeedaa wuxuu ahaa go’aan aan laga fiirsan…” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Puntland C/XAKIIN CAMEY.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo wareysi siiyey idaacadda Kulmiye ayaa ayaa hambalyo u diray Saraakiisha ciidamada iyo Culimada Puntalnd oo ka hor yimid go’aanadii maamul Goboleedyada ku gaareen magaalada Garowe, wuxuuna sidoo kale hambalyo u diray Madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Axmed Shaakir oo soo dhoweeyay baaqii madaxweyne Farmaajo.
Camey Garowe Puntland
Maxaa looga hadlay shirka Internetka ahaa ee ka qeybgalay MW Farmaajo?
Akhriso: magacyada Labada Guddi ee uu magacaabay RW Rooble